သက်ဝေ: ရင်ခုန် အိပ်မက်
Posted by သက်ဝေ at 5:15 PM
တန်ခူး February 15, 2008 at 3:49 PM
ရင်ခုန်အိပ်မက်လေးကချိုလိုက်တာ။ အမြန်ဆုံးနောက်တစ်ခါတော့ ထပ်တွေ့ ဖြစ်ပါစေ။ လှပသောချစ်သူများနေ့ဖြစ်ပါစေ။ btw...သူငယ်ချင်းလေးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု linkပေးတာကျေးဇူးနော်။
mothonlay February 20, 2008 at 7:36 PM
စီဘောက်မရှိလို ဒီမှာပဲပြောတော့မယ် လာလည်ပါတယ်အမရေ...
dilobear February 21, 2008 at 1:23 PM
watalovely blogsite u have..
nice poems too..
oh and u share the same likeness for me-to-you bears naw!
i will try to visit this site often :D
hmoo April 19, 2009 at 12:51 AM
Ummm...love is never Old & Forever..
I believe now..:)